WARARKA MAANTA - reegaay.com
Kulankii Golaha shacabka oo mar kale baaqday
War saaka ka soo baxay wadahadallada u dhaxeeyay Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoomiye Jawaari ayaa lagu sheegay in kulan maanta ay Xildhibaannada ku ballansanaayeen la baajiyay. Wadahadallo shalay dhex maray Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa ku dhamaaday is afgaran waa,hayeeshee mar kale ayey xalay isku laabteen waxaana ka hor salaaddii subax kulan soo gaaray...
Halkee ku danbeysay lacagtii Imaaraadka ee lagu qabtay Garoonka Muqdisho..?
Kadib markii la fasaxay diyaaradii siday lacag fara badan oo galabta lagu qabtay Garoonka diyaaradaha Muqdisho, kuna socotay Safaaradda Imaaraadka ee magaalada Muqdisho ayaa warar kala duwan kasoo baxayaan halka ay ku danbeysay lacagtaasi. Saraakiil ka tirsan NISA ayaa xaqiijiyey inay lacagtaasi ku wareejiyeen Bankiga Dhexe iyadoo halkaasi lagu hubin doono halka ay ku...
Wadooyinka qaar ee Muqdisho oo xiran
Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay saq dhexe waxa ay xireen wadooyinka waa weyn ee magaalada Muqdisho, maadaama maanta lagu balansan yahay kulanka Baarlamaanka oo xiisad siyaasadeed wata. Kulanka Baarlamaanka ayaa saakay lagu balansan yahay xarunta Golaha Shacabka 09:00 subaxnimo, waxaana looga hadlayaa cod u qaadista Mooshinka ka yaalla Guddoomiyaha...
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo codka kalsoonida u qaadaya Mooshinka Jawaari
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa maanta kulan ku yeelanaya xarunta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka, waxaana kulankan uu yahay mid xiisad siyaasadeed wata oo aad dadka shacabka ah ay u hadal hayaan. Guddoomiye ku xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka C/wali Ibraahim Muudey ayaa shalay gelinkii dambe xildhibaanada u kala diray fariin ah in maanta oo Isniin ah uu jiro kulanka...
Ciidanka Itoobiya oo isaga baxay Dhuusamareeb
Wararka ka imanaya Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug ayaa sheegaya in Ciidamada Dalka Itoobiya ee ku sugnaa Magaaladaas ay isaga baxeen. Ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa Dhuusamareeb ayaa aaday dhinaca Dalka Itoobiya iyada oo aan la ogeyn sababta ay magaaladaas uga baxeen. Ciidanka Itoobiya waxaa ay muddo dhowr Sano ah degganaayeen Dhuusamareeb iyaga...
Haan sun looga shakisan yahay oo ku caarisay Xeebta Ceelmacaan
Degaanka Ceelmacaan ee Gobolka Shabelllaha dhexe, ayaa waxaa lagu arkay haan wayn oo ku soo caarisay Xeebta degaankaasi, taasi oo walaac badan ku abuurtay Bulshada. Haantaan oo xiran ayaa wararka waxa ay sheegayaan in dadka degaanka ay ka cabsi qabaan inay sumeysan tahay, maadaama halis ay ku keeni karto deegaanka iyo nolosha shacabka. Wasiirka...
Madax ka socotay hirshabeele oo ku xayiran magaalada baladweyne
Garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne ayaa maanta xiran kadib markii ay sameyn ku yeelatay roobab ka da’ay magaalada. mid ka mid ah howlwadeennada garoonka diyaaradaha Ugaas khaalif ee magaalada Baladweyne ayaa u sheegay warbaaahinta in dadka ka soo dega ama ka dhoofa garoonka lagu war galiyay inaysan jirin diyaarad ka soo degeysa garoonka maadaam ay dhax...
Tiradda Gudigga dib u eegista Dastuurka oo la kordhiyay
Gudigga dib u eegista iyo lasocodka arimaha dastuurka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in lakordhiyay tirada gudigaasi . Gudoomiyaha gudigaasi Mudane Cabdi Xasan Cawaale Qeyb diid ayaa waxa uu sheegay in tirada gudigaasi oo markii hore ay ahaayeen 10 xubnood laguna soo biiriyay lix xubnood oo hor leh. Gudoomiyaha ayaa waxaa uu sheegay in lixdaan xubnood laga...
Taliyihii Ammaanka degaanka Ceelasha Biyaha oo la dilay
Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegteen in dabley hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen degaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Magaalada Muqdisho taliyihii ciidamada ee degankaasi. Waxaa ay sidoo kale sheegteen in ay ku dileen Weerar Gaadmo ah, islamarkaana ay ka qaateen Gaari uu watay sidoo kalena ay dileen mid ka mid ah Ilaaladiisa. Ninkii ay sheegteen Shabaab in ay...
New York Times Oo Xog Ka Sheegtay Khilaafka Baarlamaanka Soomaaliya
Wargeyska The New York Times ee ka soo baxa Maraykanka ayaa qoray Faallo uu ku lafa-guray Khilaafka ka dhexeeya Guddoomiyaha BFS, Prof. Jawaari iyo Madaxweyne Farmaajo. Khilaafkaasi waxa uu cirka isku shareeray Arbacadii la soo dhaafay, kadib, markii Xildhibaanadda BFS uu dhex maray Buuq sababi gaaray gacan-ka-hadal hubeysan. Qalalaasahaasi ayaa laga hortegay, dadaal ay...